विशेष Archives ~ Page5of 44 ~ Banking Khabar
बैंकिङ खबर । सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने राष्ट्र बैंकको नीति लगभल पूरा हुन लागेको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुले शाखा खोलिसकेका छन् । बाँकी १४ स्थानीय तहमा पनि छिटै वाणिज्य बैंकको शाखा पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक संचालनमा छन् । जिल्लाका
२ बर्षमै बैंकिङ पहुँचमा उत्साहजनक बृद्धि, ६१ प्रतिशत नागरिक वित्तीय पहुँचमा
बैंकिङ खबर । २०१७ मा गरिएको विश्व बैंकको सर्बेक्षणले नेपालमा वित्तीय पहुँच अत्यन्तै कम्जोर देखाएको थियो । २ बर्षको अवधिमा यो अबस्थामा निकै सुधार देखिएको छ । २०१७ को तथ्याङकमा ४५ प्रतिशत नागरिकको बैक खाता देखिएकोमा २ बर्षमा सुधार भएर ६१ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न बैंक
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्षको अवधि सकियो, डा. रेवतबहादुर कार्की बाहिरिँदै
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष रहेका डा. रेवत बहादुर कार्कीको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । उनी असोज २९ गते धितोपत्र बोर्डबाट बाहिरिँदै छन् । कार्की बाहिरिएपछि बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त रहने छ । जसमा नयाँ अध्यक्ष बन्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरुले लभिङ गरेका छन् । अर्थमन्त्रालय अन्तरगत रहेको बोर्ड पुँजी बजारको नियमनकारी
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम गर्नेको संख्या अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७६ असार मसान्तमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन बाहेकका साना तथा मझौला उद्योगमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल बक्यौता कर्जाको ३.२६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट
यो दशैंमा १२ अर्ब बराबरको नयाँ नोट सटही, नोट हिफाजतका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रह
बैंकिङ खबर । यस पटकको दशैंमा १२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज १० गतेदेखि देखि १७ गतेसम्म विभिन्न बैंकमार्फत सर्वसाधारणका लागि सो रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिएको छ । यस पटक राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक वा आफ्नो खाता भएको बैंक तथा
बैंकिङ खबर । मुलुकलाई क्यासलेश कारोबारमा पूर्ण रुपमा र्लैजाने योजना अनुसार नेपालमा डिजिटल दक्षिणाको चलन सुरु भएको छ । विशेषगरी दशैँ तिहारमा दक्षिाण दिने क्रममा नोटमा अविर लागेर विग्रने गरेका कारण मुलुकलाई हानी भइरहेको थियो । सामान्यतः एउटा नोट छपाइ गर्दा सरदर दुई रुपैयाँ लागत लाग्छ । एउटा नोटको सरदर आयु दुईदेखि पाँच वर्षसम्म हुन्छ । सय
बैंकिङ खबर । बैंकका ग्राहकहरुले दशैँमा पनि बैंकिङ सुविधा पाउने भएका छन् । प्रायः दशैँ विदाको समयमा बैंकहरु पनि बन्द हुने भएकाले दशैँमा गर्ने खर्चका लागि पहिले नै क्यास निकालेर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसपाली भने प्रायः बैंकहरुले केही मात्र भएपनि काउन्टरहरु संचालन गरी ग्राहकलाई सविधा दिने घोषणा गरेका छन् । माछापूच्छ्रे बैंक दशैँका लागि
बैंकिङ खबर । नेपालमा अहिले बैंकिङ क्षेत्रको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा हेर्दा प्रायः बैंकको केन्द्रीय कार्यालय राजधानीमा नै देखिन्छ । तर, अहिले राजधानी सरेर राम्रो ग्रोथ देखाइरहेका कतिपय बैंकहरुको सुरुवात पोखरामा भएको थियो । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये, माछापूच्छ्रे बैंकले पोखराबाट सुरुवात गरेको थियो । पोखराबाट सुरुवात गर्ने विकास बैंकहरुले धेरै छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा थप सुधार र नयाँ व्यवस्था
बैंकिङ खबर । धितोपत्र बजारको कामकारबाहीलाई थप नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न नेपाल सरकारको गत आ.ब. को बजेट बक्तव्य बमोजिम बोर्डले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखी धितो पत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गरेकोमा नेपाल सरकारबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो एक महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको समीक्षा गरेको छ । राष्ट्र बैंकको समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.९५ प्रतिशत रहेको छ । आयात ११.५ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा दुई
कृषि विकास बैंकको ४ करोड ७३ लाख चोरी भएको पृष्टि, कैलाश विकास बैंक पनि मुछियो
बैंकिङ खबर । कृषि विकास बैंकको ह्याकर प्रकरणमा ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चोरी भएको प्रष्ट्याइएको छ । यस अघि एक करोड ५६ लाख रुपैयाँ चोरी भएको भनिएको थियो । कृषि विकास बैंकले ४ करोड ३७ लाख रकम निकालिएको पुष्टि गरेको छ । लाहान शाखाबाट उक्त रकम ट्रान्ँसफर गरिएको थियो । कृषि विकास बैंकबाट भएको
बैंकिङ खबर । बैंकिङ कसुरको घटनामा पूर्व सिइओ पक्राउ परेका छन् । नक्कली धितोमा ऋण लिएको अभियोगमा प्रहरीले बैंक अफ काठमाण्डूका तत्कालीन सीईओ अजय श्रेष्ठसहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको हो । स्रोतका अनुसार यति मोटो रकम कर्मचारीले मात्रै स्वीकृति गर्न सक्ने अबस्था हुँदैन, सिइओको हत रहेको छ । अरु पक्राउ पर्नेमा ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बैंकका
एससीटी कार्डले ‘कन्ट्याक्ट लेस’ कार्ड भित्राउने, चिनको युनियन पेसँग सहकार्य
बैंकिङ खबर । स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजि (एससीटी) नयाँ व्यवस्थापनसँगै अत्याधुनिक प्रविधिे ‘कन्ट्याक्ट लेस’ कार्डमा प्रवेश गरेको छ । अब नेपालीले ‘कन्ट्याक्ट लेस’ कार्ड बोक्न पाउने छन् । विदेशमा पनि सजिलोसँग चल्ने सो कार्ड एससीटीले चिनको युनियन पे इन्टरनेशनसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने छ । स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजि (एससीटी) को नयाँ व्यबस्थापन समूहले चिनको युनियन पे इन्टरनेशनसँग
मर्जरपछि नाम निशाना मेटिएका नेपालका नामी बैंकहरु
बैंकिङ खबर । मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिको प्रभाव सबैभन्दा धेरै विकास बैंकमा परेको छ । फाइनान्सहरु पनि धेरै संख्यामा घटेका छन् भने वाणिज्य बैंकको संख्यामा खासै फरक आउन सकेको छैन । विकास बैंकको संख्या ८६ बाट २९ मा झरेको छ भने अझै झर्ने क्रममा छ । वाणिज्य बैंकको संख्या २९बाट २८ भएको छ । पुँजीवृद्धिको
झापाको विर्तामोडमा वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान सम्पन्न
अपेक्षा ढुंगाना, बैंकिङ खबर । पूर्वी नेपालको विर्तामोडमा वित्तीय जागरण राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीज्यूले वित्तीय चेतना बिना समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाले वित्तीय ज्ञान नहुदा आवश्यक भन्दा अनावश्यक ठाँउमा खर्च बढ्न गएको बताउनुभयो । एउटा कोठामा बसेर अर्को कोठामा पंखा